တႈဒိကနဥကစႈခရံဏအက်ဲဒီးအကလုႈကထါန႔ဥယမ့ႈဝဲဒဥယတႈလဲၚက်ဲဆူတႈမုဏတႈခုဥအက်ဲ (၂၉.၁၂.၂၀၂၁) | Radio Veritas Asia
တနံၚအံၚမ့ႈဝဲဒဥ (၂၉.၁၂.၂၀၂၁) .မ့ႈလ႕တနံၚအံၚယ တႈအိဥမူလ႕ တႈတီတႈလိၚဒီး တႈမုဏတႈခုဥအပူၚ ပကနႈဟူဘဥန႔ဥမ့ႈဝဲဒဥယ တႈလူၚဒိကနဥ ကစႈခရံဏအက်ဲဒီး အကလုႈကထါန႔ဥယ မ့ႈဝဲဒဥယ တႈလဲၚက်ဲဆူ တႈမုဏတႈခုဥ အပူၚအဂ့ႈကတ႕ႈန႔ဥလီၚ. ပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥစူႈနဏဝဲဒဥဒီး ကိးထီဥအကလုႈလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈန႔ဥယမ့ႈဒဥဒ္အံၚန႔ဥလီၚ.
တႈန႔ဥအဃိယပႈပါ ပီလူး (၆)ဂၚ တ ဂၚစံးဝဲဒဥယIf you want peace ,work for justice သုမ့ႈ အဲဥဒီးန႔ႈတႈမုဏတႈခုဥန႔ဥ ဒီးမၚတႈလ႕ တႈတီတႈလိၚအဂီႈန႔ဥလီၚ.ပမ့ႈအဲဥဒိးန႔ႈယ တႈမုဏတႈ ခုဥ န႔ဥဒီးပကမၚတႈလ႕တႈတီတႈလိၚအပူၚန႔ဥလီၚ.တႈန႔ဥအဃိယပတႈအိဥဖွိဥမိႈပွႈအံၚယပဏလုဥဒိဥပွ႔ၚဒိဥဝဲဒဥတဥမုဏတႈခုဥထဲလဲဥညါလ႕ခ့ခါခဲအံၚအဂီႈန႔ဥလဲဥယပသ့ဥညါဝဲဒဥန႔ဥလီၚ.လ႕တႈအိဥဖွိဥဘိးဘဥသ့ဥညါ ဝဲအလံဏတီလံဏမီအပူၚယ ပထံဥဝဲဒဥ ဒ္အံၚန႔ဥလီၚ.တႈလ႕တႈမုဏ္တႈခုဥန႔ဥယ တမ့ႈလ႕တႈဒုး တႈဎၚတအိဥဘဥဒီးတႈမၚအ႕မၚသီတႈတအိဥဘဥန႔ဥလီၚ.